Alshabaab oo Fagaara ku Toogtay 4 Ruux.
Al Shabaab ayaa fagaare ku yaalla Degmada Saakow ee Gobolka Jubbada Dhexe, waxa ay ku toogteen Afar ruux oo ay ku eedeeyeen inay ahaayeen Jaajuusiin, sida maxkamada Al Shabaab ee Degmada Saakow ay sheegtay.
Qaadiga maxkamada Shabaab ee Degmada Saakow, ayaa meel fagaare ah oo boqolaal ruux ay ku sugnaayeen kaga dhawaaqay in Afartaan ruux ay yihiin jawaasiis la shaqeysa, sirdoonada Soomaaliya, Kenya iyo Mareykanka.
Dadka ay dileen Shabaab ayaa kala ahaa:
1 Maxaamd Aadan Xassan (Maxamad Kheyr) oo 51 jir ah laguna eedeeyay inuu la shaqeynayay Sirdoonka Mareykanka
2- Cusmaan Faarax Dhaqane oo 27 jir ahaa oo lagu eedeyay in uu la shaqeynayay Sirdoonka Soomaaliya
3- Cali Cabdiraxmaan Cabdi, oo 33 jir ahaa oo lagu eedeeyay in uu la shaqeynayay Sirdoonka Soomaaliya.
4- Cabdi Sahal Dhabbar (Cabdi Xarqi) waa ninkii ugu da’da weynaa oo ahaa 57 sano jir ayaa lagu eedeeyay in uu la shaqeynayay sirdoonka Kenya.
Dilalka ugu badan ee toogashada Shabaabka ay fuliyaan ayaa wuxuu ka dhacaa Gobolka Jubbada Dhexe oo Saldhiga ugu weyn Shabaab ku leeyihiin
« Isbitaalka Laansareeti ee Qeyb cusub Lagu soo kordhiyay+SAWIRO
Sii Hayaha R/W Dalka oo kulan la qaatay Madaxweyne Ku xigeenka Galmudug+SAWIRO »